I-China Waist bag Abahlinzeki - Isitolo esidayisa yonke impahla kanye Thenga Isaphulelo esinqeni esikhwameni - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Isikhwama okhalweni
iphakethe le-hiking fanka liyisikhwama esinqeni esihle kakhulu
(1) Usayizi wayo ungangena kalula ezintweni eziningi, njengesikrini selanga, izingilazi, isambulela, umakhalekhukhwini, izibuko zelanga, isikhwama semali, njll. (Efanele imikhosi)! Amaphakethe wamadoda enziwe kahle angamelana nokungqubuzana okuningi nokungezwani. (2) Izikhwama zebhande zivame kakhulu, ezinye zincane. Yize zingasebenza kakhulu, sicabanga ukuthi lezi zifana nezitatimende zemfashini. Sithole ukuthi sigqoka lezo zikhindi lapho sigqoke izikhindi, ngoba ezinye izikhindi zinamaphakethe amancane futhi azikwazi ukubamba konke. Kepha uma ufuna ukugqoka izingubo zasemgwaqweni zesimanje, isikhwama sebhande semfashini esihle kakhulu ukukhetha okuhle.
(1) Iyunithi yokuthengisa: ngakunye (2) Usayizi wephakeji elilodwa elizenzakalelayo: ubude obungu-46cm X ububanzi obuyi-11cm, singenza ngokwezifiso usayizi wephakethe wokuklama ngokuya ngezidingo zakho, ukuze sikusindisele impahla (3) Ukupakisha imininingwane: 28cm X 39cm X 40cm. 60PCS / ibhokisi. Impahla yekhathoni: K = K ungqimba lukathayela lukasayizi-5 (4) Isisindo esikhulu sebhokisi lonke: 7.5Kg
(1) Lesi sikhwama sebhande siyigugu langempela kubahambi abakhulu nabancane. Inomklamo oyingqayizivele ngokuphelele futhi ingasetshenziswa njengesikhwama sesithunywa noma isikhwama okhalweni. Lesi sikhwama sebhande sinekamelo elifakwe uziphu kanye nephakethe langaphambili lokufinyelela ngokushesha kanye nephakethe langaphakathi. Ubude bebhande bungashintshwa ngokuya ngezidingo zakho (kungenziwa ngezifiso). Yenziwe ngesikhumba se-matte vintage futhi sitholakala ngemibala ehlukene. Idizayini elula nezinto ezisezingeni eliphakeme zenza lesi sikhwama sebhande sikhetheke. (2) Lesi sikhwama sebhande sabesilisa sihle futhi sihleleke kahle. (3) Ikhwalithi ephelele futhi emangalisayo, awekho ngempela amagama okuchaza ukuthi amangalisa kanjani.
(1) Lesi sikhwama sebhande siyigugu langempela kubahambi abakhulu nabancane. Inomklamo oyingqayizivele ngokuphelele futhi ingasetshenziswa njengesikhwama sesithunywa noma isikhwama okhalweni. Lesi sikhwama sebhande sinekamelo elifakwe uziphu kanye nephakethe langaphambili lokufinyelela ngokushesha kanye nephakethe langaphakathi. Ubude bebhande bungashintshwa ngokuya ngezidingo zakho (kungenziwa ngezifiso). Yenziwe ngesikhumba se-matte vintage futhi sitholakala ngemibala ehlukene. Idizayini elula nezinto ezisezingeni eliphakeme zenza lesi sikhwama sebhande sikhetheke. (2) Lesi sikhwama samabhande esifazane sihle kakhulu futhi sihleleke kahle